Kabo Xagga Hoose Lagaga Xardhay Magaca Allah (SW) Oo Suuqyada Hargeysa Lagu Soo Daadiyey Iyo Wasaaradda Diinta Iyo Awqaafta Somaliland Oo Hawl gal Adag Ka Gashay | Saxil News Network
Kabo Xagga Hoose Lagaga Xardhay Magaca Allah (SW) Oo Suuqyada Hargeysa Lagu Soo Daadiyey Iyo Wasaaradda Diinta Iyo Awqaafta Somaliland Oo Hawl gal Adag Ka Gashay
June 14, 2017 - Written by Abdisalaan Harir
Hargeysa(Saxilnews)Suuqyada gaar ahaan goobaha lagu iibiyo dharka iyo kabaha ee magaalada Hargeysa ayaa maalmihii u danbeeyey lagu arkayey iyaga oo iibinaya Kabo xagga hoose ay kaga xardhan yihiin magaca Allah (SW) kuwaas si xooga usoo galay dalka Somalilad.
Kabaha uu xagga hoose kaga qaran yahay Allah ayaa ah kabo Baabuudh ah oo ah kabaha Ragga,waxaana xagooda hoose kaga qoran magaca Allah oo ku qoran luuqadda Carabiga.
Kabahan ayaa magacca Allah lagu soo khafiifiyey si aan si caadi ah loo wada arkin,waxaana si caadi ah suuqyada Hargeysa loogu iibiyaa Kabahaasi iyaga oo dadka iibsadaana ay u badan yihiin Dhalinyarada wakhtigan isku diyaarinaya maalinka Ciidal Fidriga oo maanta Ramadan la sooman yahay 19 cisho.
Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somaliland oo arrinkan uu gaadhay ayaa guddig culimo ah u dirtay suuqyada caasimada Hargeysa kuwaas oo soo ururinaya kabahan xagga hoose uu kaga xardhan yahay magaca Allah,waxaana guddigan Culimada ah ay hawl gallo adag oo lagu ururinayo kabahaasi ay ka bilaabeen suuqyada Caasimada Hargeysa.
Mar aan isku daynay in aan arrinka wax ka waydiino masuuliyiinta wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somaliland ayaanay noo suurto galin,waxaana bulshadii aragtay Kabahaasi ay ku noqotay arrin Mucjiso ah.
Gabagabadiina maaha markii u horeysay ee Kabo noocan oo kale ah lagu soo daadiyo wadamada Islaamiga ah,dhawaan ayay ahayd kadib markii suuqyada Somaliland lagu arkay kabo ay xagga hoose kaga qoran yihiin Magaca Nabigeena Muxamed NNKH,kuwaas oo markii ay bulshadu fahantay iibsigoodu suuqa ka baxay.